X Mkpọchi. All mkpọchi ihuenyo gị gam akporo: Samsung, Sony, LG .... | Gam akporosis
X Mkpọchi. All mkpọchi ákwà gị gam akporo: Samsung, Sony, LG….
Otu n'ime functionalities na anyị na-aga site na ọtụtụ nke anyị gam akporo ọnụ bụ ịrụ ụka adịghị mkpọchi ihuenyo akpọchi nke anyị ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ, dịka m, nwere ndabara nhọrọ nke ịgbanye na ịgafe nchekwa site na ịmeghe ụkpụrụ, paswọọdụ ma ọ bụ akara mkpịsị aka, vidiyo vidio nke m ga-eweta n'okpuru ga-amasị gị, ọ bụkwa na naanị nwụnye nke ngwa n'efu maka gam akporo, anyị ga-enweta niile mkpọchi ákwà nke kasị mkpa gam akporo ngwaọrụ emeputa ụdị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ nwere niile mkpọchi meziri na gị gam akporo, mkpọchi mkpọchi dị ka ndị nke Samsung, Sony, ma ọ bụ LG N'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ, ị gaghị echefu post a na vidiyo nke m hapụrụ gị n'aka mmalite ya.
Iji malite, gwa gị na ngwa nke anyị ga-etinye na mbido, ngwa na-aza aha nke X Mgbapu Fantastic LockScreen, Ọ bụ kpam kpam free ngwa na Storelọ Ahịa Play, nke ị ga-enwe ike inweta site na ịpị igbe m hapụrụ dị n'okpuru usoro ndị a.
X Mkpọchi - Gburugburu & na akwụkwọ ahụ aja
Developer: X-mkpuchi Team
M na-ekwu na ngwa ahụ iji wụnye na mbido, n'ihi na n'ime ngwa ahụ na dịka ngwa dị iche iche ma ọ bụ mgbakwunye nke ngwa ngwa, anyị ga-enwe ike budata ihuenyo dị iche iche nke ụdị ndị ahụ m kwuru na mbụ, ha niile nwekwara kpamkpam na Google Play Store.
N'ihi ya, dị nnọọ site na itinye isi interface nke X Mgbapu Fantastic LockScreen, anyị ga-enwe ike ịnyagharịa site na menu ya nke gosipụtara anyị mkpọchi mkpọchi arụnyere na gam akporo anyị, mkpọchi mkpọchi akwadoro yana ngwa ọrụ ndị kacha ebudata site na ndị ọrụ.
N'ime ngwa ahụ na ịpị na igbochi isiokwu na-amasị anyị, naanị na ala nke dum anyị ga-egosi akara ngosi nke Storelọ Ahịa Play, nke naanị site na ịpị ya, anyị ga-emeghe ụlọ ahịa ngwa ngwa maka gam akporo si ebe anyi ga enwe ike ibudata ma tinye site na ngwa ngwa X, ebudatara isiokwu ndị a dị iche iche.
Anyị nwere a dịgasị iche iche nke gburugburu na ekwekọghị ịhọrọ site na n'ụzọ zuru okè simulate na Samsung mkpọchi ihuenyo na Samsung Galaxy S6 gị, Sony na mkpọchi mkpọchi ya nke njedebe nke akara ngosi nke Xperia, LG ya na iko enyo ngosi ya dị egwu na ọtụtụ mkpọchi mkpọchi ndị ọzọ dịka Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy Note 5, wdg, wdg.
Isi ihe iji mee ka a mata banyere ngwa bụ na n'ime nke ọ bụla ebudatara gburugburu, anyị nwere nhazi akọwapụtara nke ga-enyere anyị aka hazi akụkụ dị iche iche nke na akwụkwọ ahụ aja na mkpọchi ndị a nke ndị a gam akporo emeputa ụdị maara nke ọma niile.
N'ikpeazụ, enweghị m ike ịsị ọfụma n'isiokwu a na-enweghị agwa gị na anyị nwere a Random nhọrọ site na nke anyị ga-enwe ike iji ndị a niile gburugburu ma ọ bụ mkpọchi ihuenyo n'otu oge mere na oge ọ bụla anyị kụrụ Kpọghe button na anyị gam akporo, anyị na-egosi ụdị mkpọchi na a kpam kpam random na random usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » X Mkpọchi. All mkpọchi ákwà gị gam akporo: Samsung, Sony, LG….
Samsung na-ebupụta mgbasa ozi Galaxy S8 mbụ na South Korea